HAMRAKHABAR | » इन्चार्ज लाई हवल्दारले साप रिपोर्ट गरेको हु, तपाईं निदाउनु भएको थियोे भनेपछि…. इन्चार्ज लाई हवल्दारले साप रिपोर्ट गरेको हु, तपाईं निदाउनु भएको थियोे भनेपछि…. – HAMRAKHABAR
इन्चार्ज लाई हवल्दारले साप रिपोर्ट गरेको हु, तपाईं निदाउनु भएको थियोे भनेपछि….
प्रहरी ईन्चार्जको जिम्मेवारी बोकेको ब्यक्ति कार्यालय समयमै निदाएपछी सर्वसाधारणले प्रहरी सेवा कसरी पाउलान, अनुमान गर्न सकिन्छ । शुक्रबार महानगरीय प्रहरी प्रभाग बल्खुमा एउटा यस्तै रहस्य खुल्यो र सर्वसाधारणले दुख पाए । कोरोना कहरका बिच काठमाडौमा अलपत्र रुकुमका केही सर्वसाधारण बाेकेर रुकुम जान लागेको बा ३ ख ६३३६ नम्बरको बसले दिनभर महानगरीय प्रहरी प्रभाग बल्खुमा प्रहरीमा प्रहरीको सास्ती खेपेको छ । असार १७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिमबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौको स्विकृतिमा पास बनाएर काठमाडौ हिडेकाे उक्त बस निर्वाध काठमाडौ छिर्न पाएकाे थियो । जिल्ला फर्कन लाग्दा बल्खुमा राेकिएपछि गाडी मालिक दिपक चन्दले जिल्ला प्रशासनकाे पास देखाए तर उक्त पासले काम नगर्ने भन्दै ट्राफिकले पास पनि थुते । बिहान ११ बजे बल्खु पुगेका दिपकले भनसुन गरे, बिन्ती गरे तर उपाय चलेन । जिल्ला प्रशासनबाट प्रक्रिया पुर्‍याएर प्राप्त गरेको पासले काम नगरेपछि दिपक खिन्न थिए । उनकाे गाडी नजिकै पार्किङ थियोे ।
गाडी भित्र रहेका केही यात्रुहरु दिनभर छट्पटी रहेका थिए । यसरी दुख दिनु भन्दा हामीलाई काठमाडौ प्रवेश नदिएको भए हुन्थ्यो भन्दै दिपकले गुनासो गरे । यस बिषयमा बुझ्ने क्रममा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख कृष्णप्रसाद शर्मा सँग भेट भयो । तर शर्मा उक्त युनिटकाे इन्चार्ज भएपनि गाडी नियन्त्रणमा लिएको कुरा हवल्दार तर्कराज भट्टले रिपोर्ट नगरेको जवाफ दिए । हवल्दार भट्टले १०३ मा कल गरेर गाडी नियन्त्रणकाे कुरा माथिल्लो निकायमा खबर गरेका रहेछन् । याे कुरा माथिल्लो निकायबाट मात्रै इन्चार्ज शर्मालाई खबर आएछ ।शर्माले हवलदार तर्कराजलाई पड्कदै भने – “मलाई खबर गर्नु पर्दैन ? मलाई माथिबाट फोन आयो ? तपाईंले मलाई रिपोर्ट नगरेर के गरेको ?” इन्चार्ज शर्मालाई जवाफ फर्काउदै हवल्दार तर्कराजले भने – “सर मैले खबर गरेको, तर तपाईं सुत्नु भएको थियोे ।”उनीहरुको वादविवाद बुझियो- त्यहाँको इन्चार्ज कृष्णप्रसाद शर्मा अफिस समयमा मस्त निदाएका रहेछन् । यति हुदा नि उनी भन्दै थिए, हामीलाई माथिल्लो निकायबाट गाडी छाड्ने आदेश ल्याउनु अनि मात्रै गाडी छाड्छौ ।
उनले महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख एसएसपी भीम ढकाललाई फाेन गरेर आदेश माग्नु भने । गाउँबाट आएका गाडी धनी दिपक सँग न भिम ढकाल सँग कुरा गर्ने पहुँच थियो न भानु ढकाल सँग ? यस्तै गन्थनले दिउँसो १ बज्यो तर पनि गाडी छाडने छाट देखिएन ।अघि देखि याे बिषयकाे सहजिकरण गरिरहेकाे कारणले चिनेका डिएसपी देखि एसपी सबै तिर कल गरेर समस्याकाे समाधान खाेज्ने प्रयास गरियो, तर कतै बाट उचित समस्या समाधानकाे बाटो देखिएन । गाडी नियन्त्रणको खास कुनै कारण नदेखिए पछि सबै ठाउँमा भनसुन गर्नु नै पर्ने देखियो ।रमाइलो पक्ष त के भने जसले गाडी नियन्त्रण गरेका थिए, उनले नै हामीलाई भनिरहेका थिए,माथिल्लो निकायबाट पावर लिएर आउनु अनि गाडी छाडिन्छ ।
हामीलाई अचम्म लागि रहेको थियो गृहमन्त्रालयले काठमाडौ आवातजावतमा कडाइ गरेको भए थानकोटबाट किन प्रवेश गर्न दिइयाे ? जिल्ला प्रशासनले किन पास जारि गरेको ? काठमाडौका अरु ठाउँमा किन उक्त बस मज्जाले छुटन दिइयो ? कतै उपाय नलागेपछि जनार्दन शर्मा प्रभाकरका स्वकीय सचिव श्रिकुमार कठायतलाई फाेन गरेर समस्या बारे जानकारी भयो । कठायतले प्रयास गरेपनि शुक्रबार सयौंको संख्यामा गाडीहरु काठमाडौका विभिन्न ठाउँमा हाेल्ड गरेको र साँझ सम्म छुटन सक्ने जवाफ आयो ।दिनभर रुकुम जाने तयारीमा रहेका अलपत्र मानिस र गाडीवालले पाउनु सास्ती पाए । साँझ ८ बजे प्रहरीले बल्ल बल्ल गाडी छाड्यो ।किन गाडी नियन्त्रणमा लिएको हाे ? गाडी नियन्त्रण बाट कसलाई के उपलब्धि भयो कसैलाई थाहा भएन ।तर ८ घण्टा नागरिकहरु घाममा पाउनु दुख पाए ।काेराेना राेकथामका नाममा गृहमन्त्रालयले क्षण क्षणमा परिवर्तन गर्ने अबैज्ञानिक यस्तै रणनीतिहरुका कारणले नागरिकहरुले थप दुख पाइरहेका छन ।